ဘာလို့ ၁ မိနစ်မှာ စက္ကန့် ၆၀ ပဲရှိတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေနှင့် အချိန် နာရီတွေကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ – CharTake
ဘာလို့ ၁ မိနစ်မှာ စက္ကန့် ၆၀ ပဲရှိတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေနှင့် အချိန် နာရီတွေကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ
chartake | November 5, 2020 | Knowledge News | No Comments
ဘာလို့ ၁ မိနစ်မှာ စက္ကန့် ၆၀ ပဲရှိတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေနှင့် အချိန် နာရီတွေကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ
ငယ်ငယ်ကတည်းက သိလာတဲ့ အသိတစ်ခုက စက္ကန့် (၆၀) ဟာ ၁ မိနစ် ဖြစ်ပြီး၊ မိနစ် (၆၀) ဟာ ၁ နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ၆၀ ဖြစ်သလဲ ? ဘာ့ကြောင့် ၁၀၀ မဖြစ်တာလဲ ? စသည်ဖြင့် စဉ်းစားကြည့်ဖူးကြမည် ထင်ပါတယ်။ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ကျောင်းသားက မေးတဲ့အခါ ဆရာတို့ ဘယ်လို ဖြေကြမလဲ?
အခုလို (၆၀) ကို အခြေထားပြီး တွက်တဲ့စနစ်ဟာ ခရစ်တော် မပေါ်မီ ၃၅၀၀ ခုနှစ် (BC 3500) ကတည်းက ဆူမားရီးယမ်း လူမျိုးတွေ စတင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဝိုင်းတို့ တြိဂံတို့ ဟာ (၆၀) နဲ့ တွက်လို့ရသော ပုံစံများဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစနစ်ကို ဘေဘီလိုနီယန်း ( ဘေဘီလုံ) တွေက ဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး သင်္ချာပညာ နဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ်များမှာ အသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။ (၆၀) ကို အခြေယူတဲ့ နည်းစနစ်ကို စက်စီဂျက်စီမယ် (sexagesimal) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ရှေးအခါက နေ့ နှင့် ည အချိန်များကို နေ နာရီ၊ ကြယ်တာရာ များကိုကြည့်ပြီး တွက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ နှင့်ည ကို ၂၄ နာရီအဖြစ် စတင် သတ်မှတ်တာကတော့ ရှေးအီဂျစ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေနာရီရဲ့ အရိပ်ကိုကြည့်ပြီး နေ့ (၁၀) နာရီ အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ မိုးသောက်ချိန် ၁ နာရီ၊ ညနေ ၁ နာရီ ရှေ့နောက် ထည့်ပေါင်းပါတယ်။
ညကတော့ ကြယ်တာရာတွေကို ကြည့်ပြီး ၁၂ နာရီ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၂၄ နာရီပါ။ sexagesimal (၆) နဲ့ စားလို့ ပြတ်တဲ့ ဂဏန်းတွေပါပဲ။ စက္ကန့် (၆၀)ကို ၁ မိနစ်လို့စပြီး သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့တာကတော့ ဂရိ နက္ခတ်ပညာရှင် Hipparchus ဖြစ်ပါတယ်။
၁ နာရီကို sexagesimal သင်္ချာ နည်းနဲ့ ၆၀ ပိုင်းလိုက်တာကို ” Prime Minute ” ပထမ ပိုင်းသေးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ သေးငယ်ခြင်း Minute (မိုင်နျု) ကနေ မိနစ် ဖြစ်လာပါတယ်။
Prime Minute ကို နောက်ထပ် (၆၀) နဲ့ ဆက်ပိုင်းတဲ့အခါ ” Second minute” လို့ခေါ်တဲ့ ဒုတိယ အပိုင်း ( သေးငယ်ခြင်း) ကို ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ဒုတိယ Secondကနေ စက္ကန့် ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။(Third Minute နဲ့Fourth Minute တို့လည်း ရှိပါသေးတယ်။)
ကျွန်မတို့ သုံးနေတဲ့ နာရီကိုတော့ ၁၆၅၆ မှာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုး အာကာ သ ပညာရှင် ခရစ်ရှန် ဟိုင်ဂဲန်းစ် (Christiaan Huygens ) က စတီထွင် အသုံးပြုခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူသုံးခဲ့တာ ချိန်သီးပါတဲ့နာရီမျိုး (Pendulum clock) ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ တော့ သူ့ရဲ့ နာရီပုံစံ ဒီဇိုင်းကိုပဲ တကမ္ဘာလုံး ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် ။ ဒေါ်ဥမ္မာ (ပုသိမ်) Crd to original
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတလျှောက်မှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်း
ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ တခုခု ပြဿနာရှိနေတာလား … လူတွေရဲ့ပရောဂကြောင့်လား ပညာရှင်များ သုံးသပ်ပေးကြပါဦး
ထူးထူးဆန်းဆန်း သက်တန့်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ ယူကလစ်ပင် မျိုးစိတ်အကြောင်း
ရှေးယခင်က အိမ်ခြေပေါင်းတစ်သောင်း ကျောင်းပေါင်းတစ်ထောင်နှင့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည့် နတ်မြို့ ( သို့) ကျောက်မြို့ဟောင်း